Buy အိမ်ရှင်မ​လေး​ဒေတွက်ေ​​မ်ာတာကြိတ်စက် (12,500Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
အိမ်ရှင်မ​လေး​ဒေတွက်ေ​​မ်ာတာကြိတ်စက်(အသီး,အရွက်,အသားငါး)ကြိတ်စက်လေး​နော်​......♨ ♨
အသီးအရွက်နဲ့အသားငါးတို့ကို ကြေညက်အောင်ကြိတ်ပေးနိုင်ပါတဲ့ ကြိတ်စက်လေးပါရှင်။
2လီတာဝင်ကြိတ်စက်အကြီးပါရှင်။ဓားသွား ၄ချောင်းနဲ့ ဖြစ်ပြီး ဓားသွားကလည်းအလွန်ထက်တာမို့ အသား ငါး တွေကိုလည်း ကြေညက်တဲ့ထိကြိတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ ဆေးကြောတဲ့အခါမှာလည်းတခုစီိဖြုတ်လို့ရတာမို့အဆင်ပြေလွယ်ကူစေပါတယ်ရှင့်။
☺ Wait time. 10 day or 2weeks
Panasonic Electric rice cooker S...
Shake & Taste အသီးဖျော်စက်
အမည်: အိမ်ရှင်မ​လေး​ဒေတွက်ေ​​မ်ာတာကြိတ်စက်